कोठामा एक्लै बसेकी छोरीको मोबाईल अचान’क हेर्दा आमा-बुबाको होʼसहवा’स उ’ड्यो ! – Life Nepali
एजेन्सी – प्रविधिको बारेमा बेलामा नै हो’स नपुर्याए एकदिन जो कोही बर्बा’द हुनुपर्ने हुन्छ । किनकी जब थाहा हुन्छ । सबै कुरा विति’सकेको हुनेछ । चीʼनमा यस्तै भएको छ । त्यहाँ एक महिलाले नयाँ मोवाइल फोन किनेपछि पुरानो फोन ११ वर्षकी छोरीलाई खेʼलाउन दिइन् । त्यस बेलादेखि त्यो फोन छोरीको खेलौनाʼहरुको एक हिस्सा बन्यो । छोरी दिनहुँ त्यो फोन खेलाउँथिन् । आमाबाबुले छोरीले फोनमा के गर्दैछिन् भन्नेतर्फ चासो दिʼएका थिए’नन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस*
६ महिनापछि उनीहरुलाई बल्ल थाहा भयो कि छोरीले फोनमा के गर्दिर’हिछिन् । छोʼरीको कार्यले उनीहरुको होʼसहवा’स उडेको छ ।घटना चीनको हुबेइ प्रान्तको जिंगझोउ सहरको हो । त्याहाँकी चिङ नामकी महिलाले नयाँ फोन किनेपछि पुरानो फोन ११ वर्षकी छोरी’लाई खेलाउन दिएकी थिइन् । सुरुसुरुमा छोरीले यसमा गेम खेल्थिन् । फोन चा’लु अवस्थामा भएकोले एक दिन उनले आफ्नै फोʼनबाट बाʼहिरबाट नास्ता मगाइन् ।
यसको पैसा तिर्नको लागि उनले आमासँग बैंकको पिन कोड मागिन् । त्यसपछि भने उनलाई बैंकको पिन याद रहन्थ्यो । विस्तारै उनले पुरानो फोनमा इन्टरʼनेटमा’र्फत लाइभ स्ट्रिमिʼङ शो हेर्न थालिन् । यस्ता शोʼहरु हेर्न पैसा तिर्नु’पथ्र्यो । उनले आमाʼबुवाको बैंक खाताको पिन नम्बर प्रयोग गरेर बैंकबाट पैसा तिर्दै शो हेर्न थालिन् । यस्ता शो हेर्न उनले मोटो रकम फोʼनबाटै तिर्न थालिन् ।*भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस*
Previous कस्तो मान्छे कस्तो हुनु पर्दो रहेछ ! अहिले निकै भाईरल बन्यो निशाको पहिलेको यो भिडियो , हेर्नुहोस पुरा भिडियो
Next मेडिकल विज्ञानकै पहिलो केसः २ वटा योनी २ वटा पाठेघर, १८ वर्षकी हुँदासम्म थाहा थिएन